About Umhlali in Xhosa - The Umhlali Project
I-Umhlali Project yiprojekthi yokunqanda ulwaphulo-mthetho nobundlobongela kamsinya olukwiLokishi yaseWalmer, eBhayi. Lubambiswano oluqhubeka phakathi kweCentre for Justice and Crime Prevention (i-CJCP), iYunithi yoPhando ephathelele kwezeSini, ezeMpilo nezoBulungisa yaseYunivesithi yaseKapa (i-GHJRU), noPhuhliso lwabaFundi iMasifunde (i-MLD). I-Umhlali Project inenkxaso-mali ekhuselekileyo yomnikeli wamazwe ngamazwe ukuya kutsho kowe-2020.
Iinjongo ze-Umhlali Project
I-Umhlali Project inenjongo enkulu kakhulu yeprojekthi yokuyila, ukuphumeza nokuhlola yokunqanda ulwaphulo-mthetho nobundlobongela kwamsinya enokulinganiswa nakweminye imimandla. I-Umhlali Project igxile kule mimandla yongenelelo ilandelayo, yonke eyilwe ngokusekelwe phambi kokuqala kophononongo okunabileyo nohlolo lwezidingo:
1. Abantu ngokuzimeleyo
2. Izikolo (ukusuka kwisikolo sabantwana abancinci ukuya kwisikolo semfundo ephezulu)
AmaNgenelelo neeKhomponenti zeeNkonzoI-Umhlali Project inikeza la mangenelelo alandelayo neekhomponenti zeenkonzo:
Uqeqesho lweNkqubo-sikhokelo yoKhuseleko lweSikolo yeSizwe (i-NSSF)
Ukuthantamisa nokuqeqesha izikolo ekuphumezeni i-NSSF
Iinkqubo ezingaphandle kwekharityhulam ezinje ngobugcisa nedrama
Amacweyo neentetho zokusetyenziswa nokusetyenziswa kakubi kweziyobisi ukulungiselela abafundi
Uqeqesho lwabasebenzi lokhuseleko lwaBantwana
Iiseshini zamanyathelo okhuselo nabafundi besiGaba sesi-2
Ululeko-ngqondo losapho nabantu ngabodwa
Amacweyo ezakhono zokukhulisa abantwana
Iiklabhu zomsebenzi wesikolo wasekhaya
Iinkonzo zolutsha olungabazali
Amacweyo neentetho zokusetyenziswa nokusetyenziswa kakubi kweziyobisi
Amacweyo obudoda obububo kumakhwenkwe namadoda
UkuKhula koMntwana ukusuka ekuZalweni ukuya kwiminyaka esiBhozo
Uncedo ngobhaliso neSebe lezoPhuhliso loLuntu
Ukuqeqeshwa kwabasebenzi ngemiba yesigaba sokukhula komntwana ukusuka ekuzalweni ukuya kwiminyaka esibhozo
Ukuphunyezwa kwelayibhrari yezinto zokudlala
ISakhono samaZiko & noLuntu
Ukupapashwa kwephepha-ndaba lengingqi kabini ngonyaka
Ukupapashwa kwe-“Walmer’s Own Youth Magazine” kabini ngonyaka
Ukuqeqesha abasebenzi ngemiba yokhuselo lwabantwana
Incwadana ngemiqondiso evela kwasekuqaleni
Uphephe: iqonga lonxibelelwano le-intanethi elingavezi magama apho abantwana abangamaxhoba banokufumana khona uncedo.
UkweNziwa kweziGqibo ezijonge ukuNcedwa koLutsha
Amacweyo ezakhono zokuphila
Imisebenzi engaphandle kwekharityhulam
ULutsha olukreqileyo esikolweni
Ukunceda abafundi ekukhetheni amakhono neenkonzo zeengcebiso
Uqeqesho lwezakhono zomsebenzi
Amacweyo neentetho zokusetyenziswa kweziyobisi nokusetyenziswa kwazo kakubi
Itheko lokuboniswa kwezamakhono
Amaqela ekuJoliswe kuwo
iziko lemithombo yamakhono nemfundo elikwi-intanethi.
UkuSetyenziswa kakuBi koTywala & neziYobisi
Uqeqesho lwabachaphazelekayo ngemiqondiso evela kwasekuqaleni namangenelelo
Amaphulo emfundo nawokwazisa
IZiko lezoBulungisa nokuNqandwa koLwaphulo-mthetho (i-CJCP) yinkampani engenzi nzuzo yeCandelo 21 ejonge ngokukodwa kuphando nesenzo sokunqanda ulwaphulo-mthetho nobundlobongela kwamsinya. I-CJCP yasekwa ngowe-2005 yi-Open Society Foundation for South Africa ngomnqophiso wokukhuthaza nokomeleza isenzo sokunqandwa kolwaphulo-mthetho nobundlobongela eMzantsi Afrika. Imimandla apho i-CJCP isebenza khona iquka ukhuselo lwabantwana nolutsha nokomelela, ukukhulisa abantwana, ukusetyenziswa kakubi kweziyobisi, isigaba sokukhula komntwana ukusuka ekuzalweni ukuya kwiminyaka esibhozo nokhuseleko esikolweni. Imisebenzi eyenziwayo ye-CJCP’imalunga ne-70% yophando ne-30% yophumezo longenelelo. Ngelixa kugxilwe ngokuphambili kuMzantsi Afrika, i-CJCP ikwasebenza kwilizwekazi le-Afrika jikelele.
UPhuhliso lwabaFundi i-Masifunde liqumrhu elinceda uluntu elinamava angaphezulu kweminyaka elishumi. IMasifunde ilawulwa yiBhodi yabaLawuli engahlawulwayo ebeka iliso kwimisebenzi yalo. Iinkqubo ziphunyezwa liqela leengcali eziqeqeshiweyo ezilulutsha ezinomdla.
IMasifunde inikeza inkxaso yemfundo ngendlela egqibeleleyo nenozinzo kubafundi abanomdla abangaphezulu kwama-350 abavela kwiingingqi ezihluphekayo. Ungenelelo lwezemfundo luquka inkxaso yemfundo , uqeqesho ngezakhono zokuphila, kunye nemisebenzi engaphandle kwekharityhulam kummandla wezobugcisa, amajelo eendaba nezemidlalo. Yonke imisebenzi ijonge ekwenzeni abathabathi-nxaxheba bayo ukuba basebenzise ngokupheleleyo isakhono sabo, baphumelele kwimfundo nasebomini, ukuze batshabalalise indlala. Ngokukhuthaza abanye ukuba balandele umzekelo abanguwo, baba ngabenzi botshintsho ekuhlaleni.